Họrọ Igwefoto Igwe Kwesịrị Ekwesị - OMG Solutions
Ahọrọ Igwe Igwe Ọdụ Ahụ Kwesịrị Ekwesị
Igwefoto ahụ na-eyi n’ahụ na-abịa n’ụdị dị iche iche, a ga-eyi ha ma tinye ya n’ahụ dị iche iche nke gụnyere: isi, ubu na obi. Ọ dị ezigbo mkpa ịhọrọ ụdị igwefoto ụdị kacha mma dabara na ọrụ a ga-arụ. Ọ dịkwa mma ịmara na igwefoto niile nwere ntụpọ na ọdịda ha, ha ga-abụrịrị egwuregwu kacha mma maka ọrụ ọ bụla achọrọ. Laa azụ n'oge izizi igwefoto n'ọdụ ụgbọ mmiri ike, enwere ọtụtụ oge ọpụpụ. Ndị uwe ojii achọghị naanị ka “nnukwu nwanne” soro ha na-aga, na-elegharị anya na ha na-emegharị ma na-anụ mkparịta ụka ha niile. Ngwa ngwa mgbe ọtụtụ iri afọ gachara, ndị uwe ojii na-arịọ ugbu a ka etinye ha n'ụgbọala ha. Ha achọpụtala ahụmịhe nke ụwa niile na ugboro ole ndị ọrụ ụgbọ ala ga-adọkpụrụ ma tinye aka n'okwu. Knowingmara banyere etu o si enyere ndị ọrụ aka ijide ndị na - akpata nke a na - ama ha ikpe, na - egbochikwa mkpesa na - enweghị isi nke ụmụ amaala nwere naanị mkpesa megide ndị uwe ojii. Mgbe emesiri webata igwefoto ahụ na-eme ahụ ike, enwere mbụ mpụga site na akụkụ dị iche iche. Ọtụtụ n'ime ihe kpatara ya bụ otu mmetụta ahụ o nwere na “nwanne nnukwu mmadụ” mbụ dị ka mgbe mbụ ndị uwe ojii batara igwefoto ụgbọ mmiri. Mana ka oge na-aga, ewepụrụ ya ngwa ngwa ka nyocha gosipụtara ịnabata ngwa ngwa ngwa ngwa, ndị ọrụ uwe ojii hụrụ n’oge na-adịghị anya dịka teknụzụ dị mma nke nwere ike ichebe ha site na mkpesa ụgha-nke ghọrọ ihe a na-ahụkarị.
Eziokwu ugbu a bụ na ọtụtụ ndị ọrụ chọrọ igwefoto ahụ ozugbo enwere ike. Yabụ na ọ dịla mkpa inwe ụfọdụ njiri mara ịtụle mgbe ị na-ahọrọ igwefoto ahụ, ma ị na-eme ya ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ ma ọ bụ dịka mmadụ. Lee ihe ole na ole ị ga-ele anya mgbe ị na-ahọrọ:
Ka esiri hụ: ihe ọ bụla nlele igwefoto na-ewere vidiyo ma ọ bụ eserese dị ezigbo mkpa, isi ihe ọ bụla igwefoto ọ bụla na-eji weghara foto dị na ya nwere ike bụrụ ihe kachasị dị mkpa ma bụrụkwa ihe kachasị mkpa maka mmezi ahụ ọhụụ maka ndị mmanye iwu. . Onye ọ bụla nke na-eji igwefoto ga-akpachara anya gbasara ebe a na-eme ihe ndekọ, nke a na-enyere onye na-edekọ aka ịmata ma ọ bụrụ na itinye igwefoto na-enyere aka ma ọ bụ na ọ gaghị enyere aka weghara ihe osise. Ọ dị mkpa iburu n’obi na ịnwe igwefoto n’elu igbe ahụ, nwere ike ịpụta na ozugbo onye uwe ojii ahụ banye n’ọnọdụ ịkpọasị nke metụtara ịlụ ọgụ, enwere ike ịdọrọ igwefoto ahụ n’ala nke ga-apụta na ọ ga-ejide akpụkpọ ụkwụ nke isiokwu ahụ. Mpaghara kachasị mma iji dobe igwefoto bụ otu ebe n'otu ebe dị ka ahịrị nke onye ọrụ. Areasfọdụ mpaghara enwere ike ịtụle bụ:
na okpu nke bọl bọlbụ
ntị ntị nke ugogbe anya maka anwụ
epaulet nke edo
Mpaghara ndị a niile na-arụ nnukwu ọrụ nke iicomi usoro nke anya. Nke a dị oke mkpa ma a ga-etinye ọtụtụ cognizances na nke a.
Anwụ ngwa ngwa na ntụkwasị obi: dkwesịrị ị jụọ onwe gị “kedu ụdị teknụzụ m na-eji?” anwụ ngwa ngwa na-arụ nnukwu ọrụ na-ekpebi ọkachasị ogologo oge kamel ga-adị. Ekwesịrị inwe nguzozi na ihe ị họọrọ dị ka nke jupụtara na mmiri, dịka nke nwere ike ibubigoro ibu mgbe ụfọdụ. Inwe cam ahu nwere aru gabu otutu nsogbu, idi ihe nwere ike ime ka igwefoto ghara idi ebe obu na o zigara ndi n’enye ya ihe na nyochaa ya ezighi ezi. Enwere otutu ihe omuma atu nke gia nke siri ike nke arapuru ha n’ime ulo ndi ndochi anya n'ihi na ibu ha adighi aghaghi agha ike. Izu oke bu mgbe igodo, buru n’uche n’uche ichoro iji mee ya na odi ka igha iru ya. Na oge ị na-achụ, igwefoto ahụ siri ezigbo ike agaghị arụ ọrụ ọ bụla n'ihi na ọ ga-eme ka ị daa mbà ma mee ka ike gwụ gị ngwa ngwa. Ọ dị mkpa na ị ga - enwe ike ịdabere na igwefoto gị nke ọma ọ bụghị naanị ịdekọ ihe niile ị na - ahụ ma ọ bụghị ịkpaghasị ma ọ bụ mee ka ị daa, ọ ga - eme ka a ga - asị na ọ nweghị ebe ọ nọ.
Nkasi obi na nha: Ogo igwefoto ahụ bụ ihe dị ezigbo mkpa mgbe ị na-ahọrọ igwefoto, ịnwe ndị pere mpe nwere ike ịba uru nke ukwuu mana ịbụ nnukwu abụghị. Dị ka anyị maara mgbe ọ na-abịa na nkasi obi na nha nke ngwaọrụ, Mkpa ọkụ ọ ka mma. Ọ dị mkpa na ị ga-agba mbọ maka itule n'etiti oke ibu, nha nke ngwugwu na etu ọ ga-adịgide. Ihe ngwugwu pụtara na igwefoto ahụ dum kwesiri ya ejikọtara ya ka ọ rụọ ọrụ. Nke a bụ ngụkọta nke ngwugwu niile ọ nwere ike ịgụnye ihe dị ka waya abụọ, batrị batrị na ikekwe njide / ikpe. Ọ dị mkpa na ị ga-akpachara anya na ị ga-eji nwayọ dabere na ịdị arọ, nke a bụ iji zere ngwaọrụ na-agbaji n'ụzọ dị mfe.
Enweghị ike iji: Ọ bụ ihe dị mma na onye ọ bụla chọrọ ngwaọrụ dị mfe iji gbanye ma gbanyụọkwa, nke pụtara na ọ nweghị ụdị teknụzụ ga-enwe ekele maka ya. Ọ ga - abụ ihe siri ike ma ọ bụrụ na ndị okenye chọrọ iji aka ha rụọ ọrụ ole na ole iji wepụta ma ọ bụ gbanyụọ cams. Wezụga iji arụ ọrụ adịghị n'ọhịa ahụ, ọ dị mkpa inwe ike iji ya mgbe onye uwe ojii na-alọta na nchebe. A na-atụ anya onye ọrụ uwe ojii ahụ ịnọ oge ọfịs na oge karịa n'okporo ụzọ, ịnwe teknụzụ na-adịchaghị mgbagwoju anya nwere ike ime ka ha mee ihe na-abụghị ihe achọrọ. Site na nke a ekwesịrị ịmara na ka oge na-ewe ma sie ike bụ nbudata vidiyo ndị ahụ, kaa ya aha, jikwaa ya ma debe ya n'otu etiti, mgbe ahụ nke a ga-apụta na ha ga-enwe obere oge maka ihe ọ bụla.
Njikwa azụmazu data: Okwu a na - ekwu okwu dị ka otu igwefoto si arụ ọrụ yana njikwa ya bụ nbudata, chekwaa ma kesaa ma nweghachite data buru ibu. Nke a bụ mgbe echekwara data ogologo oge, mana ọ dị oke mkpa. Nke a abụghị naanị ihe dị mkpa maka ndị uwe ojii kamakwa maka ndị nọ na sistemụ ikpe mpụ na mgbe ọ dị oke mkpa na ha ga-enwe ike ịghọta ngwa ngwa ihe niile site na obere nkọwa. Ọ dị mkpa na oge ọ bụla a na-arịọ ihe ngosi vidiyo, ọ dị ma nke a abụghị naanị ọrụ ndị uwe ojii na-agba gburugburu obodo iji nyefee ma dezie ma chekwaa. Ekwesịrị inwe ngalaba na-ahụ maka ịchịkwa data.
Ịnye ọnụahịa: ọnụahịa nke teknụzụ ọ bụla a na-azụta ga-abụrịrị nchekwa nchekwa, ọ dị ezigbo mkpa na ihe a anaghị adị oke ọnụ. Ọnụahịa ahụ nwere ike ịdị mgbagwoju anya karịa ka achọpụtara n'ezie ebe ọ dị mkpa maka nkwalite ọhụụ, nnọchi nke ihe mkpuchi na-akwadoghị ma ọ bụ ọbụna ọnụ ahịa mmezi nwere ike ịpụta mgbe niile. Ọ dịkwa mkpa ịmara na maka ụfọdụ ngwaọrụ anaghị ekpuchi nhọrọ nchekwa, a ga-emefu ego ka ukwuu n'ịzụta ebe nchekwa na ọbụna sava maka nchekwa igwe ojii. Ọ nwekwara ike ịdị mkpa iji were ndị ọrụ naanị ọrụ ha ga-abụ ijikwa data ahụ. Ndị a bụ mpaghara ebe mmefu ego na mmefu na-abanyekwa.
Ntinye nno-otutu: ndị uwe ojii na-ahụ maka ọrụ na-achọ ọtụtụ nhọrọ dịnụ karịsịa na ịrịgo, a ga-enwe nhọrọ nke ịhọrọ ihe ọ bụla kachasị mma maka gị; ọ nwere ike ịbụ: iko, ubu, ahụ, okpu ma ọ bụ olu akwa. Ime mgbanwe na nhọrọ dịnụ bụ nnukwu uru dị mkpa.
Nkwado ndị ahịa: Igwe onyonyo eyi, nwere ike bụrụ ihe na-adọrọ adọrọ ma dịkwa egwu mana ọ ka nwere ọghọm. A na-emezi mmejọ nke passi na ndị ọhụrụ ana - emepe, n'oge ụfọdụ ma ọ bụ ọzọ ị nwere ike ịchọ ịgwa ndị ọrụ nka nkwado maka nsogbu ị nwere ike inwe na ngwaọrụ gị. N'ụdị dị otu a, ọ dị mma ịnwere onye si na ụlọ ọrụ ị nwere ike ịgwa ya okwu ma ga-aza gị ozugbo. Ebe o doro anya na igwefoto eyi ahụ bụ ngwaọrụ maka nchekwa yana ebumnuche pụtara ìhè, ị ga-achọ azịza ajụjụ ndị a na-abịa ọsọ ọsọ. Nke a bụ ihe dị oke mkpa na ịhọrọ ebe ọ bụ na ọ ga-abụrịrị na nsogbu ọrụaka ga-adị, ọ dị mkpa ka onye ọkachamara dị njikere ịga mee ihe banyere ha n'oge ejiji.
Njide Ihe Omume: oge ụfọdụ ihe omume nwere ike ime ngwa ngwa tupu obere agbanyere igwefoto, emeela ụfọdụ ọrụ dị oke mkpa. Nke a nwere ike ịgụnye ikpe dị ka ịpị onye uwe ojii n ’obi ma ọ bụ ike ịkụ ha ihe n’ihu tupu ịgba ọsọ maka ya. A nabatara ya n'ụwa niile na mgbe achọrọ iji jide, ọ ga-enwerịrị iji ya. Mgbe ụfọdụ ị ghaghi iwere akụkụ nke ihe ị na-atụghị anya ya. Ha na - eme tupu i nwee ike ịpị bọtịnụ ndekọ, ihe ndị a bụ ihe mere bọtịnụ ndekọ ga - adị ezigbo mkpa.
Ka ị na-elele ihe ndị a dị mkpa ma na-eburu ha n’uche, ịhọrọ igwefoto ahụ nwere uwe kachasị mma maka ọrụ ahụ ga-adị mfe.